I-Semalt - Ezinye Izinkinga Ezicindezelayo Ngomsebenzi Wangaphakathi Ku-Google Analytics
Umsebenzi wangaphakathi yincazelo 1 yenombolo ngemuva kwemininingwane yolwazi lwesisekelo ku-Google Analytics. Akufanele yini into okuthiwa nge-spam? Njengoba empeleni icasula, ugaxekile ungahlukaniswa kahle, kanti umsebenzi wangaphakathi kunzima ukubona ukuvakashelwa kwangempela.
U-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , uchaza lapha amathiphu awusizo ukukusiza ukuthi uphathe umsebenzi wangaphakathi.
Uyini umsebenzi wangaphakathi?
Umsebenzi wangaphakathi udala ulwazi olwenziwe nguwe noma omunye umuntu ovela eqenjini elikhuphuka kumuntu noma kwisayithi. Lezi zinqola zibhalisiwe ku-Google Analytics njengokungathi zivela esihambelwaneni sangempela.
Lokhu kungaholela ekulimazeni okuningi, ikakhulukazi ngoba kamuva kunzima ukuhlukanisa ukuthi yikuphi ukuvakashelwa okweqiniso futhi okuvela kubantu abathile bayasuka esakhiweni.
Kuyini ikheli le-IP?
Ikheli le-IP liyinombolo engavamile ehlukanisa izinhlelo, ama-PC namagajethi ahlukene..Ama-IP ahlelwa ezinhlotsheni ezimbili: okusesidlangalaleni okukuhlukanisa kuwebhu yonke kanye nangasese. I-contingent kumthengisi wakho wokufinyelela kwenethiwekhi (ISP), omunye angase abe ne-IP Static ne-Dynamic IP. Ngaphansi kwakho uzothola iziqondiso zokuvala i-IP static.
Ukuvimbela umsebenzi wangaphakathi nge-IP static ku-GA
Kudingeka ukuthi ushaye amasistimu hhayi amajejethi: uma usakaza ikheli le-IP elihlobene nesistimu, zonke izigaja ezihlobene nayo nazo zihanjiswe.
Uma usebenzisa ucingo ukuhlola i-interface yakho ye-intanethi nge-Wi-Fi: uma usebenzisa imininingwane yakho yewebhu ephathekayo, umphakeli wakho ukhetha i-IP ehlukile yonke imzuzu. I-Wi-Fi iyathandwa kakhulu uma uhlola noma iyiphi isayithi usebenzisa ifoni yakho ngoba inamandla okwenza umsebenzi wakho usebenzisa amasu angaphansi.
Indlela yokwenza isiteshi somsebenzi wangaphakathi
Ungalahla i-IP eyodwa noma ububanzi be-IP esiteshini esifanayo. Lokhu kuthuthukiswa ibha yokuma ngemuva kwe-IP yonke efana nalokhu.
Indlela Yokugwema Ububanzi be-IP ku-Google Analytics
Ngaphandle kokuhlelwa ukuthi ukhona enhlanganweni enhle, kungenzeka ukuthi ubhekene nobubanzi be-IP elandelayo. Ukugwema ukungena ku-IP ngayinye, ungenza isiteshi nge-regex ethuthukile.
Kopisha ukukhuluma okudalwe kwiBhokisi lesibonelo seSiteshi
Ukuhlola isiteshi, sesha izindawo ezingavunyelwe kusuka kusayithi bese ucacisa ukuthi lo msebenzi, ungabonakali umbiko oqhubekayo, ungeza umlingisi ekukhulumeni.